Kudiliza Abenzi Bezinhlanganisela & Abahlinzeki | China Dematting Inhlanganisela Imboni
3 Ku-1 Ithuluzi Lokuchithwa Lezilwane Elijikelezayo
3 Ku-1 Ithuluzi lokuShedula eliPhendukezelayo lihlanganisa yonke imisebenzi yokudiliza ukusetshenziswa kwedeshedi kanye nokukama okujwayelekile ngokuphelele.Zonke izinkomba zethu zenziwe ngensimbi engagqwali .so zihlala isikhathi eside.
Cindezela inkinobho yesikhungo bese ujikelezisa ithuluzi elingu-1 elijikelezayo lokuchitheka kwesilwane ukushintsha imisebenzi oyifunayo.
Ikamu elichithayo lisusa ingubo yangaphansi efile nezinwele ezengeziwe kahle.Lizoba ngumsizi wakho omuhle phakathi nezikhathi zokuchitha.
ikama lokudiliza linama-blade ayi-17, ngakho-ke lingasusa amafindo, ama-tang kanye namata kalula.amabhande ayiziphetho eziyisiyingi eziphephile.Ayizukulimaza isilwane sakho futhi igcine ingubo yakho yesilwane esinezinwele ezinde icwebezela.
Okokugcina kuyinhlanganisela ejwayelekile. Leli kamu linamazinyo asondelene kakhulu.sisusa i-dander namazeze lula kakhulu.libuye libe lihle ezindaweni ezibucayi njengezindlebe, intamo, umsila nesisu.